Home News Wasiir beeyle oo sheegay in Qof walbo oo ajnabi ah Bankiga dhexe...
Wasiir beeyle oo sheegay in Qof walbo oo ajnabi ah Bankiga dhexe loo dhiibi karaayo!!
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle Oo galabta wareysi siiyey Idaacada BBC-da Laanteeda Afka Soomaaliga ayaa waxa uu ka hadlay Qadiyada Bankiga Dhexe iyo Hogaanka Cusub.
Waxa uu Wasiirku difaacay in Awood u leeyahay Qof Maaliyada wax ka qaban kara oo xitaa Ajnabi loo dhiibi karo Baanka Dhexe Ee Soomaaliya.
C/raxmaan Ducaale oo su’aalaha lagu ad adkeeyey,ayaa la weydiiyey in Xukuumada Soomaaliya Qof Ajnabi ah rabto inay xulato hogaaminta Bankiga Dhexe.
Waxa uu Wasiir Beyle sheegay in Carab iyo Ajaanib ay ka qeyb yihiin dadka soo gudbisaday Codsiga Shaqadaasi.
Wasaarada Maaliyada Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay been abuur tahay cid gaar ah ay wataan oo Ajnabi ah inay jirto oo Bankiga Dhexe Dalka udhiibaan